Taorian’i Zotsara dia naratra indray koa ny avokavoky ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra, Ibrahim Amada.
Tratry ny fahavoazana ny lohaliny ary dia mety tsy afaka hiakatra kianja aloha izy ao anatin’ny herinandro eo farafahakeliny.
Hanomboka ny mey izao ny herinandron’ny literatiora. Ry zareo eo anivon’ny IFM Analakely no mikarakara ny hetsika ary ho avy hanokatra izany amin’io fotoana io ny masoivoho frantsay miasa eto amintsika.
Mbola sarotra ho an’ireo olom-pirenena hatramin’izao ny ho resy lahatra fa birao nasionaly misoroka ny loza sy tandindon-doza ny BNGRC. Anisan’ny mahatonga ireo ahiahy ireo fanapahan-kevitra mitarazoka matetika toy ny fanalana ireo vato hatahorana hikodia eto an-drenivohitra.